Soo-saarista iyo Warshadda Shiinaha ee loo yaqaan 'Barium Chloride' | Kala xulasho
Barta dhalaalida: 963 ° C (shidan)
Barta karkarinta: 1560 ° C
Cufnaanta: 3.856 g / mL at 25 ° C (shidan)
Kaydinta kuleylka : 2-8 ° C
Kala-baxa: H2O: milma
Cuf gaar ah: 3.9
Sifeynta Biyaha: Waxaa lagu milmaa biyaha iyo maadada methanol. Ku milmi kara asiidhyada, ethanol, acetone iyo ethyl acetate. Xoogaa ku milma acid nitric iyo hydrochloric acid.
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan: Magnesium Chloride Calcium Chloride, Barium Chloride,
Sannadka Xaqiijinta: 2006
Shahaadada Nidaamka Maamulka: ISO 9001
Goobta: Shandong, Shiinaha (Dhul Weyn)
UN Maya. 1564
Kareemka Baaruum Biyaatiijiyada
CAS Maya.: 10326-27-9
Qaaciddada Molecular: BaCl2 · 2H2O
CAS Maya.: 10361-37-2
Qaaciddada Molecular: BaCl2
EINECS Maya. 233-788-1
Diyaarinta Warshadaha Barium Chloride
Waxaa badanaa loo isticmaalaa barite ahaan maadada ay kujiraan qaybaha sare ee barium sulfate barite, dhuxusha iyo kaalshiyamka chloride waa la isku qasan yahay, waana la calcinay si loo helo barium chloride, jawaab celinta waa sida soo socota:
Habka wax soo saarka ee Barium Chloride anhydrous: Barium chloride dihydrate waxaa lagu kululeeyaa in ka badan 150 ℃ iyadoo fuuqbaxa ah si loo helo waxyaabaha ka sameysan barium chloride. ay
Barium chloride sidoo kale waxaa laga diyaarin karaa barium hydroxide ama barium carbonate, tan dambe waxaa si dabiici ah loogu helaa macdanta "Witherite". Cusbadahan aasaasiga ahi waxay falceliyaan siinta biyoum chloride fuuq bax ah. On baaxadda warshadaha, waxaa loo diyaariyaa iyada oo loo marayo geedi socodka laba-tallaabo
1) Kaloum Biyaariyo, Fuuqbax
Koloriin Baaruum (BaCl. 2H2O) 99.0% min
Kaalshiyamka (Ca) 0.036% max
Sulfide (oo ku saleysan S) 0.003% max
Biyo La'aan 0.05% max
2) Barium Chloride, Fuuqbax
Kaalshiyamka (Ca) 0.9% max
Qoyaanka 0.3% max
Biyo La'aan 0.5% max
Yaryar Yar Yar Oo La Aqbalay Ayaa Laheli Karaa
Qaybinta Shirkadaha La Siiyay Sumcad
Shixnad Tayada Qiimaha Qiimaha ah
Dammaanad / Dammaanad-qaadis Caalami ah
Dalka Asalka, CO / Foomka A / Foomka E / Foomka F ...
In ka badan 10 sano khibrad xirfadeed u leh soo-saarka Sodium Hydrosulfite;
Amarka tijaabada yar waa la aqbali karaa, muunad bilaash ah ayaa la heli karaa;
Bixiyaan falanqeyn suuq macquul ah iyo xalal wax soo saar;
Si macaamiisha loo siiyo qiimaha ugu tartamaya heer kasta;
Qiimaha wax soo saarka oo hooseeya sababo la xiriira faa'iidooyinka khayraadka deegaanka iyo kharashyada gaadiidka oo hooseeya
u dhawaanshaha dekedda awgeed, hubi qiimaha tartanka.
1) Barium Chloride, oo ah milix raqiis ah, oo milmi karta, barium chloride waxay ka heleysaa codsi ballaaran shaybaarka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii tijaabo loogu talagalay ion sulfate.
2) Barium chloride waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta kuleylka biraha, soosaarka milixda barium, qalabka elektaroonigga ah, waxaana loo isticmaalaa sidii biyo jilciyaha.
3) Waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo wakiilka fuuqbaxa iyo reagentyada falanqaynta, waxaa loo isticmaalaa farsameynta kuleylka daaweynta.
4) Waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa baaritaanka ion sulfate.
5) Warshadaha, barium chloride waxaa badanaa loo isticmaalaa nadiifinta xalka brine ee dhirta chlorine caustic iyo sidoo kale soo saarida cusbada daaweynta kuleylka, adkeynta birta.
6) Soo saarida midabbada, iyo soo saarista cusbada kale ee barium.
7) BaCl2 waxaa loo isticmaalaa rashka si loo siiyo midab cagaaran oo dhalaalaya. Si kastaba ha noqotee, sunteedu waxay xaddideysaa ku-dhaqankeeda.
8) Barium Chloride sidoo kale waxaa loo isticmaalaa (oo wata Hydrochloric acid) oo ah tijaabada sulfates. Marka labadan kiimiko lagu daro milix cusbo ah, qaabab soo rogmada ayaa cad, oo ah barium sulfate.
9) Soosaarida xasiliyayaasha PVC, saliidaha saliidda, barium chromate iyo barium fluoride.
10) U kicinta wadnaha iyo muruqyada kale ujeedooyin daawo ah.
11) Samaynta midabada dhoobada dhalada ah ee kineskopka.
12) Dhinaca warshadaha, barium chloride waxaa badanaa loo adeegsadaa isku darka midabbada iyo soo saarida jiirka iyo dawooyinka.
13) Sida socodka socodka soosaarida birta magnesium.
14) Soo saarista soodhaha caustic, polymerka, iyo xasiliyayaasha.
Qeexitaanka guud ee baakadka: 25KG, 50KG; 500KG; 1000KG ， 1250KG Bacda Jumbo;
Cabbirka baakadka: Jumbo cabbirka boorsada: 95 * 95 * 125-110 * 110 * 130 ；
Baaxadda kiishka 25kg: 50 * 80-55 * 85
Bacda yar waa bac laba-lakab ah, lakabka kore-na wuxuu leeyahay filim daahan ah, oo si wax ku ool ah uga hortagi kara nuugista qoyaanka. Bacda Jumbo waxay ku darsataa walxaha ka hortagga UV, oo ku habboon gaadiidka masaafada dheer, iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo cimilo leh.
Aasiya Afrika Australasia
Bariga Dhexe Yurub
Waqooyiga Ameerika Bartamaha / Koonfurta Ameerika
Bixinta & Rarista
Muddada Bixinta: TT, LC ama gorgortan
Port of Loading: Qingdao Port, Shiinaha
Waqtiga Lead: 10-30days ka dib markii la xaqiijiyo amarka
Sifooyinka halista ah:Koloriin kuleylku waa mid aan la iibin karin. Waa mid aad sun u ah. Marka xiriirada boron trifluoride, falcelin rabshad leh ayaa dhici karta. La liqay ama la neefsaday waxay sababi kartaa sumeysi, badanaa waxay marto marinka neef mareenka iyo marinka dheefshiidka si loogu soo duulo jirka bini'aadamka, waxay u horseedi doontaa hoos udhaca iyo gubashada hunguriga, calool xanuun, casiraad, lallabbo, matag, shuban, dhiig kar, majirto wadatashiga sharciga. , casiraad, dhidid badan oo qabow, murqaha oo daciifa, socodka, araga iyo dhibaatooyinka hadalka, neefsashada oo ku adkaata, wareer, tinnitus, miyir qabka badanaa. Xaaladaha daran, waxay sababi kartaa dhimasho lama filaan ah. Ion Barium waxay sababi karaan kicinta muruqyada, ka dibna tartiib tartiib ayey isu beddelaan curyaannimo. Jiirka afka LD50150mg / kg, jiirka peritoneal LD5054mg / kg, jiirka waa xidid LD5020mg / kg, hadal ahaan eeyga LD5090mg / kg.
Qiyaasta gargaarka degdegga ah: Marka maqaarku taabto, biyo raaci, ka dibna si fiican ugu dhaq saabuun. Marka indhaha la xiriiro, biyo raaciyo. Marka bukaanada neefta u neefsaday waa inay ka baxaan aagga wasakhaysan, oo ay u guuraan hawo nadiif ah, nastaan ​​oo diirimaad yeeshaan, haddii loo baahdo, neefsashada macmalka ah waa in la qaataa, raadso daryeel caafimaad. Markii aad liqdo, isla markiiba biyo raaci afka, qashin-qubka caloosha waa in lagu qaataa biyo diirran ama 5% sodium hydrosulfite oo loogu talagalay catharsis. Xitaa liqidda wax ka badan 6h, qashin-qubka caloosha ayaa sidoo kale lagama maarmaan ah. Faleebada faleebada waxaa si tartiib tartiib ah loogu qaadaa 1% sodium sulfate of 500ml ~ 1 000ml, duritaanka xididka sidoo kale waxaa laguqaadan karaa 10% sodium thiosulfate of 10ml ~ 20ml. Botaasiyamta iyo daaweynta astaamaha waa in la sameeyaa.
Milixda cusbada milixda ee milixda chloride si dhakhso leh ayey u nuugtaa, markaa astaamuhu si dhakhso leh ayey u soo baxaan, waqti kasta oo wadnaha lagu xidho ama curyaannimo muruqyada neefsashada ayaa sababi kara dhimasho. Sidaa darteed, gargaarka degdegga ah waa inuu ka soo horjeedaa saacadda.
Ka-dhalaalida biyaha Grams-ka oo ku milmaya 100 ml oo biyo ah heerkullo kala duwan (℃):
Sumeysan Fiiri barium chloride dihydrate.
Khataraha & Macluumaadka Badbaadada: Qeybta: walxaha sunta ah.
Qiimaynta sunta: sun badan.
Cudurka ba'an ee sunta-rat LD50: 118 mg / kg; Af-Mouse LD50: 150 mg / kg
Sifooyinka halista ololaya: Ma guban karo; dabka iyo qiiqa sunta ah ee sunta chloride ee ay kujiraan xeryahooda barium.
Astaamaha keydinta: Qasnadda hawo-mareenka heerkulka hooseeya; waa in si gooni ah loogu kaydiyaa cuntada lagu daro.
Wakiilka bakhtiinta: Biyaha, kaarboon laba ogsaydhka, qalalan, carro ciid ah.
Heerarka Xirfadeed: TLV-TWA 0.5 mg (barium) / mitir cubic; STEL 1.5 mg (barium) / mitir cubic.
Barium Chloride waxaa laga yaabaa inay si xoog leh ugu falgasho BrF3 iyo 2-furan percarboxylic acid oo ah qaab fuuq-baxa ah. Qaadista Khatarta oo ah 0.8 g ayaa laga yaabaa inay dhintaan.
Wax aan guban karin, walaxda lafteedu ma gubato laakiin way ku kala jajaban kartaa kululaynta si ay u soo saarto qiiqa sunta ah iyo / ama sunta. Qaarkood waa ogsajiyeyaal waxayna shidi karaan waxyaabaha guban kara (alwaax, xaashi, saliid, dhar, iwm). La xiriirida biraha ayaa laga yaabaa inay isu beddesho gaaska hydrogen ee ololi kara. Weelasha ayaa qarxi kara marka la kululeeyo.
Xeerarka Khatarta: T, Xi, Xn
Bayaanka Khatarta: 22-25-20-36 / 37 / 38-36 / 38-36
Bayaanka Amniga: 45-36-26-36 / 37/39
WGK Jarmalka: 1
Fasalka Halista: 6.1
Xirxirida Kooxda: III
Xogta Maaddooyinka Halista ah: 10361-37-2 (Xogta Maaddooyinka Halista ah)
Sumeysan LD50 hadal ahaan Bakayle: 118 mg / kg
Sumeeyn lagu cuno, marinada hoose, marinnada xididka, iyo dariiqyada intraperitoneal. Nuugista nuugista ee baaruum chloride waxay la mid tahay 60-80%; nuugista afka waxay u dhigantaa 10-30%. Saamaynta taranka ee tijaabada ah. Macluumaadka isbedelka Sidoo kale eeg BARIUM COMPOUNDS (soluble). Marka la kululeeyo in ay kala daadato waxay soo saartaa qiiqa sunta ah ee Cl-.
Hore: Sodium Hydrosulfite
Cusbada Barium Chloride
Xalka Kaalshiyam Bromide, Hydrosulfite, Kaalshiyam Bromide Anhydrous, Kalshiyaam Bromide Liquid, Hydrosulfite De Sodium, Natrium Hydrosulfite,